Vanhu Votaura Maonero Avo nezveKugadzwa kwaVaChamisa seMutungamiri weVanhu
Veruzhinji vanoti vari kutambira nemaoko maviri kugadzwa kwakaitwa mutungamiri weMDC VaNelson Chamisa semutungamiri wevanhu kana kuti People’s President nemusi weMugovera.
Zvichakadi, VaChamisa vakurudzirwa kuti vatore matanho nekukasika ekugadzirisa hupfumi hwenyika.
Veruzhinji vataura neStudio 7 vakaita saVaReuben Mutangadura vanoti danho rakatorwa neveruzhinji rekugadza VaChamisa semutungamiri wavo rinoratidza pachena kuti zvakaziviswa nekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission zvekuti mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa ndivo vakakunda musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru hazvisi kutambirwa neveruzhinji nanhasi.
VaTapiwa Nyandima vanoti sevechidiki vave kutarisirawo kuti VaChamisa vagadzirise matambudziko ari kusangana neveruzhinji munyika uye vati VaMnangagwa vanofanirwa kusiya basa zvachose vosiya VaChamisa vari panyanga.
Izvi zvatsinhirwa naVaTineyi Munetsi avo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reConcerned Citizens Agenda. Mutauriri wesangano reHashtag Tajamuka, VaMakomborero Haruzivishe, vanoti chave kudikanwa ndechekuti VaChamisa vachitora masimba ekutungamira hurumende.
Asi mumwe mugari wemuHarare, VaFunny Chaparadza vanoti kugadzwa kwakaitwa VaChamisa neveruzhinji ndiro rinonzi dambavanana. Izvi zvatsinhirwawo naVaWarlord Zinhumwe avo vanogara mumusha weMbare muno muHarare.
Mutungamiri wesangano revagari vemuHarare reHarare Residents Trust, VaPrecious Shumba vanoti zvakaitwa izvi zviri paviri. Mudzidzisi paGreat Zimbabwe University, VaTakafira Zhou, vanoti chitsvambe chave kuna VaChamisa kuti chii chavachaitira vanhu vari kuvatsigira.
VaChamisa vari kuramba vakatsika madziro vachiti havasi kuzotambira zvakaziviswa neZEC kuti ndizvo zvakabuda musarudzo kunyange zvakatsinhirwa nedare repamusorosoro munyika reConstitutional Court.
Vakaudza vatsigiri vavo kuti vari kuronga kuratidzira kwakakomba munyika yose munguva pfupi iri kutevera kudzamara VaMnangagwa vabva pachigaro uye ivo vatora matomhu vachiti ndivo vakakunda musarudzo.
Asi nekune rumwe rutivi, VaMnangagwa nebato ravo reZanu PF vanoti vakakunda zviri pachena vachiti VaChamisa vanofanira kutambira zvakabuda musarudzo.
Mutauriri weZanu PF, VaSimon Khaya-Moyo vakaudzawo bepanhau reHerald kuti zviri kutaurwa nemutevedzeri wemutungamiri weMDC, VaMorgen Komichi zvekuti bato rinopikisa iri ragadza VaChamisa semutungamiri wenyika hazvina kusiyana nekuda kupidigura hurumende. VaMoyo vakayambirawo vachiti kuita kwakadai kutamba nemoto.